Mysure11 Apk 2022 Download Ho an'ny Android [Update] | APKOLL
Manam-pahaizana momba ny fanatanjahan-tena ve ianao ary te-hanana fomba hahazoana vola amin'ny fahalalanao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe Mysure11 Apk. Io no sehatra fanatanjahantena nofinofy farany, izay ahafahan'ireo mpampiasa mahazo vola mitaky vola be amin'ny hetsika ara-panatanjahantena samihafa.
Araka ny fantatrao dia misy karazana fanatanjahan-tena isan-karazany eran'izao tontolo izao, izay tian'ny olona jerena. Ny cricket dia iray amin'ireo fanatanjahan-tena malaza sy malaza indrindra, aorian'ny baolina kitra, fa any Azia, ny cricket no tena be mpitia indrindra. Ny vahoaka dia manana ny fampahalalana rehetra momba ny ekipa sy ny filalaovan'ny mpilalao tsirairay.
Noho izany, mieritreritra ve ianao fa manana fahalalana sy fampahalalana momba ny mpilalao rehetra, avy eo izahay miaraka amin'ity rindranasa mahavariana ity ho anao rehetra, amin'ny alalàn'ny fahalalanao dia manampy anao hahazo vola sarotra. Te-hahazo vola tena izy ve ianao?
Raha eny, dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary hizaha ny zava-drehetra momba ny fampiharana, miaraka aminay izahay. Na iza na iza afaka mahazo vola an-tapitrisany amin'ny fahalalana. Noho izany, alohan'ny hampiasana an'ity fampiharana ity dia manaova fampahalalana momba izany.
Topimaso momba ny Mysure11 Apk
Izy io dia fampiharana Android ahazoana vola, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo vola tena izy. Manolotra sehatra fanatanjahantena fantasy izy io, izay miankina mivantana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena tena misy. Izy io dia manolotra karazana fanatanjahan-tena fantasy, izay azon'ny mpampiasa atao mora ny misafidy sy manatevin-daharana amin'ny fanatanjahantena, mahaliana azy ireo.
Ny olona samihafa dia liana amin'ny karazana fanatanjahantena isan-karazany, izany hoe ny mpankafy cricket dia liana amin'ny cricket ary manana ny fampahalalana rehetra momba izany. Noho izany, afaka mahazo vola mora foana izy ireo. Misy dingana tsotra amin'ny fitadiavam-bola, miankina amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ho avy ny toe-javatra rehetra.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy misafidy mpilalao samihafa ary manao ekipa amin'ny fantasy, izay iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra. Ny ekipanao no hanapa-kevitra ny vola miditra aminao. Raha manana zava-bita tsara amin'ny lalao tena izy ireo mpilalao ao amin'ny ekipanao, dia afaka mahazo an-tapitrisany amin'ny lalao iray ianao. Raha milalao lalao ratsy izy ireo, dia mety ho very daholo ianao.
Misy crédit voafetra, izay nampidirinao tamin'ny fividianana ekipa. Tsy maintsy mifantina mpikapoka, mpilalao baolina, mpilalao wicket, ary mpilalao baolina kitra ianao. Azonao atao mihitsy aza ny misafidy mpilalao samihafa toy ny kapitenin'ny ekipa sy kapiteny lefitra, izay manome isa fanampiny. Misy endri-javatra hafa amin'ity fampiharana ity, izay azonao jerena mora foana sy mahazo vola.
Ny hetsika samihafa dia manome fitsipika samihafa ho an'ity lalao ity toy ny ao amin'ny T20 ny fepetra takiana dia tsy mitovy amin'ny ODI, Test, ary T10. Noho izany, ny mpampiasa dia tsy maintsy mahafantatra ny momba ny fitsipiky ny lalao isan-karazany, izay ananany hevitra momba ny lalao sy mora ny fifantenana ny ekipa.
Ao anatin'izany ny cricket, misy ihany koa ny fanatanjahan-tena hafa, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo vola haingana. Hizara lisitr'ireo fanatanjahantena misy eto ambany izahay. Afaka mahita fanatanjahantena hafa bebe kokoa koa ianao, amin'ny fijerena azy ireo.
Matetika ny olona no miahiahy momba ny rafi-pandraharahana. Noho izany, aza manahy momba izany, afaka manana rafitra fifanakalozana azo antoka ianao, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo ny volany. Izy io dia manome fidirana kaonty mivantana, izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa ny vola rehetra.
300 rupees ny vola kely indrindra amin'ny famindrana, izany hoe ny vola ambany noho ny 300 dia tsy afaka mamindra. Noho izany, ny mpampiasa dia tsy maintsy mandresy 300 farafahakeliny amin'ny fanaovana fifampiraharahana. Mahazo App dia manome mombamomba an-trano, izay ahafahan'ny mpampiasa manamarina ny fifandanjany imbetsaka.
Misy lafiny maro hafa amin'ity rindranasa ity izay azonao zahana sy ahazoanao tombony amin'izany. Ny fampiasana kaody referral an'ny Fasntasyman dia hanome anao vola 100 maimaimpoana. Noho izany, ampidino fotsiny ny Mysure11 App ary mankafiza mitady vola.
Anaran'ny fonosana com.img.mysure11
Mora ny mamorona ekipa fantasy
Misafidiana mpilalao tsara indrindra
Fanatanjahantena marobe azo ampiasaina
Vaovao farany momba ny lalao mitohy sy ho avy
Mora ny mamindra ny vola azo
Rafitra teboka samihafa amin'ny hetsika samihafa
Manana fampiharana mitovitovy amin'izany izahay hahazoana vola.
Matetika ny olona matoky ny tranonkalantsika amin'ny fisintomana, satria manome fampiharana izahay aorian'ny fitsapana sy fanamarinana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity mba hamoronana ilay bokotra fisintomana azo atao, manamboatra paompy tokana fotsiny ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Mysure11 Apk no fampiharana tsara indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena izay tia mampiasa ny fahalalany ary mahazo vola kely. Noho izany, ampiasao ny fahalalanao ary manangana ny ekipanao ary mahazoa ny loka. Sintomy ity fampiharana ity ho an'ny rohy fampidinana etsy ambany ary manomboka mamorona ekipa sy vola.
Sokajy Apps Tags Mysure11, Mysure11 Apk, Mysure11 App Post Fikarohana
B Mod Apk Download ho an'ny Android [ML Mod]